Politburo yeZanu PF Inosunga Kuti Vasina Kupiwa Zvigaro muHurumende Vashandire Bato
Mutauriri weZanu PF, VaSimon Khaya-Moyo
Komiti yepamusoro mubato reZanu PF yePolitburo neMuvhuro yakabvumirana kuti vange vari makurukota muhurumende avo vasina kudomwa mudare idzva remakurukota nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vapihwe mabasa pamuzinda webato iri.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti homwe yeZanu PF yakabooka zvekuti bato iri rinogona kupinda muhomwe yenyika kuti ribhadhare vanhu ava.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wePolitburo uyu neMuvhuro, mutauriri weZanu PF, VaSimon Khaya Moyo vakati vainge yabvumirana kuti vamwe vevakange vari makurukota ehurumende vasina kuwana zvigaro mudare remakurukota rakatoreswa mhiko nemutungamiri wenyika svondo rapera vapihwe mabasa pamuzinda webato iri uye vachange e vachibhadharwa mari dzemihoro.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakasiya vamwe vakuru-vakuru mubato ravo mudare remakurokota ravakazivisa neChishanu avo vaigara vakadomwa mudare iri nguva nenguva vakaita saVaPatrick Chinamasa, VaObert Mpofu, VaSimbarashe Mumbengegwi naivo VaSimon Khaya Moyo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University, Doctor Takavafira Zhou, vati vari kutyira kuti Zanu PF ichange ichipinda muhomwe yenyika kuti ibhadhare vanhu ava sezvo isina mari muhomwe yayo.
VaMoyo vati mubato ravo mune basa rakakura kwazvo rekuzadzisa zvavakavimbisa veruzhinji pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa30 Chikungu. Asi Doctor Zhou vati danho ratorwa neZanu PF iri rinoratidza kuti bato iri ratotanga kugadzirira sarudzo dzemuna 2023.
VaMnangagwa vakadoma dare remakurukota rine vanhu vashoma uye vechidiki vane hunyanzvi hwakasiyana-siyana vachiti dare iri rine basa guru rekuona kuti hupfumi hwenyika hwavandudzwa kuitira kuti veruzhinji vagare zvakanaka.